Imibuzo Evame Ukubuzwa - AfricArXiv
I-AfricArxiv iwumthombo wamahhala, ovulekile kanye nengobo yomlando yedijithali eholwa umphakathi yocwaningo lwase-Afrika. Sihlinzeka ngenkundla engenzi nzuzo ukuze ososayensi base-Afrika balayishe amaphepha abo okusebenza, imibhalo yangaphambili, imibhalo yesandla eyamukelwe (amaphrinti angemuva), namaphepha ashicilelwe. Funda kabanzi nge-AfricArxiv lapha: https://info.africarxiv.org/about
Ubani i-AfricArxiv yakhelwe?
I-AfricArxiv yakhelwe ososayensi base-Afrika abavela kuyo yonke imikhakha ukuze babelane ngemiphumela yocwaningo lwabo, okuhlanganisa imibhalo yangaphambili, imibhalo yokubhala, ikhodi kanye nedatha.
Kungani sidinga inqolobane eqondene ne-Afrika?
Sidinga inqolobane eqondene ne-Afrika ukuze:
Yenza ucwaningo lwase-Afrika lubonakale kakhudlwana
Sabalalisa ulwazi lwama-Afrika
Nika amandla ukushintshana kocwaningo ngaphakathi kwezwekazi
Khuthaza ukusebenzisana kwezwekazi ngalinye
Izinqolobane zokuphrinta zivame ukusetshenziswa kakhulu kumongo we-Open Science futhi zenza esinye sezinyathelo ezilula nesisebenza ngempumelelo ukwenza umphumela wocwaningo ufinyeleleke. Okuthunyelwe kumongathwa ososayensi ngakho-ke kunenqubo ethile yokubuyekezwa kontanga ehilelekile - nokho ihlukile ekushicilelweni kujenali ebuyekezwe ngontanga. Ezimweni eziningi lokhu kusengenzeka ngemva kokuhambisa endaweni yokugcina yokuphrinta.
Ihluke kanjani i-AfricArxiv kwezinye izinqolobane ezizayo?
Nge-AfricArxiv sifuna ukunikeza inkundla ososayensi base-Afrika ukuze bashicilele umphumela wabo wocwaningo ngokushesha futhi mahhala. Ngaleyo ndlela bangakwazi ukuthola impendulo ngomsebenzi wabo, bawuthuthukise ngokuqhubekayo futhi baphinde bakhombe ozakwethu bokusebenzisana kumaphrojekthi wesikhathi esizayo. Ama-preprints ayathuthuka ukuze abe yingxenye ebalulekile ye-Open Science. Ukuba nenqolobane eqondene ngqo nomphakathi wabacwaningi base-Afrika nakho kungadala ucwaningo lwemikhakha eyahlukene olubhekana ngqo nezindaba zase-Afrika.
Sithemba ukuthi izonikeza ososayensi base-Afrika ukubonakala okwengeziwe emazweni omhlaba futhi iphinde ibambe iqhaza kakhulu ekusebenzisaneni kocwaningo lwangaphakathi kwe-Afrika. Isayensi yakhiwe yimikhakha eminingi eyahlukene enamaqembu ocwaningo asakazeke emhlabeni wonke. Ukwakha imiphakathi yalezi zifundo futhi kuqondiswe ezifundeni ezithile kuvumela ososayensi nabanye ababambiqhaza (abenzi benqubomgomo, osomabhizinisi, abasebenzi bezokwelapha, abalimi, izintatheli) ukuthi bathole imiphumela yocwaningo abayithakaselayo ngamasu kakhudlwana.
Yiziphi izinselele ososayensi base-Afrika ababhekana nazo?
Ukubonakala okuphansi emazweni ngamazwe
Uxhaso lwezimali olukhawulelwe
Abacwaningi base-Afrika bavame ukuhlanganiswa kancane kumanethiwekhi ocwaningo lwamazwe ngamazwe
Bazozuza kanjani ososayensi e-Afrika?
Ukubonakala okwengeziwe komphumela wocwaningo ezwenikazi
Engeza ezinye izibalo mayelana
umphumela wocwaningo ofakwe kumajenali wamazwe ngamazwe?
Imiphumela yocwaningo lwase-Afrika jikelele?
Inethiwekhi engcono futhi nisebenzisane
Sithemba ukuthi ososayensi base-Afrika bazokwazi kabanzi mayelana nemiphumela yocwaningo, ikakhulukazi ukuvala ukuhlukana phakathi kwemiphakathi yesayensi ye-francophone kanye ne-anglophone ezwenikazi. Sikhuthaza ababhali ukuthi banikeze isifinyezo esifushane ngesiFulentshi noma ngesiNgisi.
I-AfricArxiv izohlinzeka ngenkundla yokusesha kwamasu kozakwethu ababambisene ngaphakathi e-Afrika nakuwo wonke amazwekazi.
Yadalwa kanjani i-AfricArxiv?
Kwaqhamuka umqondo e-AfricaOSH nge-Twitter. Vula Uhlaka Lwesayensi inikeza ingqalasizinda emzamweni oholwa ngumphakathi, owehlisa izindleko nobunkimbinkimbi futhi ovumela ukugxila emfundweni emayelana nokuphrinta kusengaphambili nokukhuthazwa yi-AfricArXiv.
Sithintana nososayensi base-Afrika ngabanye ukuze bagxume imibono futhi bathuthukise umqondo futhi baphumele kososayensi ukuze babambe iqhaza ekuqasheni ukuthunyelwa (ithimba le-PR), ukulinganisa, ibhodi lokweluleka lekomidi eliqondisayo.
Funda ukukhishwa kwezindaba kwe-AfricArxiv lapha: https://cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service
Iphathwa kanjani i-AfricArxiv?
Sinethimba elizosebenza futhi lixhumanise imisebenzi sikude ku-inthanethi. Ngemva kokuhambisa, omengameli ababili noma ngaphezulu bazohlola ama-athikili ukuze bathole ukunemba nokuhambisana.
Ubani okhokhela izindleko zokuphatha i-AfricArxiv?
Azikho izindleko zangempela/zezezimali ezibalulekile ezihilelekile (ngaphandle kokuthenga isizinda nesikhathi) - yonke imizamo nokusebenza kwethimba kwenziwa ngokuzithandela ukuze kuthuthukiswe nokuhlukahluka kwesayensi.
Ingqalasizinda ihlinzekiwe I-OSF, ethuthukiswe i-Center for Open Science, inhlangano engenzi nzuzo eyakha ingqalasizinda yempahla yomphakathi yokugeleza komsebenzi wocwaningo futhi ixhase imizamo yemizamo eminingi eholwa umphakathi ehloselwe ukwandisa izinqubo ze-Open Science.
Ososayensi base-Afrika bangayisebenzisa kanjani i-AfricArxiv?
Ososayensi base-Afrika bangalayisha kokubili okuphrintiwe ngaphambili kanye nokuphrinta okuthunyelwe kanye nemiphumela engemihle, ikhodi, amasethi edatha, amathisthi, nolwazi lwendabuko lapho kufanele khona futhi ngokuhambisana UNDRIP Article 31.
Bangakwazi futhi ukusesha endaweni yokugcina izinto ukuze bafunde ukuthi abanye ososayensi ezwenikazi benzani emkhakheni wabo wocwaningo.
Siyakwamukela ukuthunyelwa ngesiNgisi, isiFulentshi nesiPutukezi kanye nezilimi zasendaweni zase-Afrika njengesi-Akan, isiTwi, isiSwahili, isiZulu, … futhi sakha iqoqo labahleli abangahlela lokho okuthunyelwe. Ngokuvamile kulula ukuchaza umsebenzi wakho ngolimi lwakho lwendabuko. Njengoba ososayensi abaningi base-Afrika bekhuluma izilimi eziningi ukuthunyelwa kamuva kujenali ebuyekezwe ngontanga yesiFulentshi noma isiNgisi ngeke kube yinkinga kakhulu.
Ososayensi base-Afrika abafisa ukwabelana ngemibhalo yabo yesandla ku-AfricArxiv noma enye inqolobane yokuphrinta kusengaphambili kufanele bahlole kusenesikhathi, uma ngabe ijenali abahlela ukuyishicilela ihambisana nokushicilela umbhalo wesandla endaweni egcinwe kuyo. Iningi lamajenali ezemfundo liyakwamukela ukushicilelwa kwangaphambili. Sincoma ukuthi uhlole SHERPA / RoMEO isevisi ukuze uthole imininingwane noma inqubomgomo yokwabelana nge-athikili yejenali.
Yiziphi izindlela zokwamukelwa?
Okusalungiswa kwenqubomgomo: okuhanjisiwe kufanele kuhlangabezane nezinga elithile lekhwalithi futhi kuthobelane nezinqubo zesayensi ngokuvamile ezinhle kanye nezimiso zesayensi ezivulekile.
Iziqondiso zokuhambisa izocutshungulwa kahle emasontweni ambalwa ezayo ngokucobelelana nabanye ososayensi base-Afrika. Sizokwakha umphakathi oqinile ozungeza umphakathi oqondisayo futhi siqhubeke nokuxoxisana nawo ukuze siqhubeke sithuthukisa futhi sicacise inkundla ngezidingo ezithile kumongo wocwaningo lwase-Afrika.
Ingengezwa kanjani idatha eyengeziwe?
Ngombhalo wesandla ngamunye ungakwazi ukwengeza izengezo kunoma iyiphi ifomethi ngesitoreji esingenamkhawulo. Vele uchofoze, bese uhudula bese udedela noma ukhethe amafayela kuphrojekthi ngayinye. Ungakwazi futhi ukuhlanganisa kusuka kwezinye izinsiza ezifana ne-Figshare, iDropbox, noma i-GitHub. Bheka lapha njengesibonelo https://osf.io/nuhqx/.
Ngingayibuyekeza kanjani inguqulo yombhalo wesandla?
Ukuze uhlele okukodwa kokuphrinta kwakho kwangaphambili okwamukelwe, ungabuyekeza okufakiwe kwe-DOI ngenguqulo entsha yombhalo wesandla wesihloko nge-akhawunti yakho.
Ungase futhi ukwazi ukuvele wengeze i-athikili ebuyekezwe kontanga ethi DOI enguqulweni yamanje yokuphrinta ngaphambili.
- ungakwenza kanjani lokho ku-OSF: usizo.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint<
Ngingakwazi ukushicilela umsebenzi wami ngejenali ehlukile ngemuva kokwabelana ngokuphrinta kwami ​​​​kwangaphambili ku-AfricArXiv?
I-AfricArXiv kanye nezinkundla zozakwethu iyinkundla yokugcina yokuphrinta ye-Open Access ngakho nathi wabelana ngomsebenzi wethu njenge okuluhlaza Vula Ukufinyelela (ukuzifaka kungobo yomlando). Ngakho yebo ungakwazi ukuthumela imibhalo yakho yesandla kujenali.
Siphakamisa ukusesha https://www.ajol.info/index.php/ajol futhi https://doaj.org/ ukuthola ijenali ethembekile ongashicilela kuyo umsebenzi wakho ngamashaji athengekayo okucubungula i-athikili (APCs).
Inikezwe amandla yi I-HTML5 I-FAQ Ephendulayo
Ingabe uneminye imibuzo? Sithumele i-imeyili ku info@africarxiv.org